सेप्टेम्बर - Best of Japan
यस पृष्ठमा, म सेप्टेम्बरमा होक्काइडोको मौसमको बारेमा वर्णन गर्नेछु। सेप्टेम्बर ग्रीष्म देखि शरद transitionतु मा संक्रमणको समय हो। त्यसोभए, होक्काइडोमा, यो दिनको समयमा पनि राम्रो देखिन्छ। मौसम अलि अस्थिर छ र वर्षाका दिनहरू बढ्छन्। तर उही समयमा, पर्यटक संख्या अगस्तको तुलनामा पर्याप्त कम छ। तपाईं फुर्सतको यात्रा गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। होक्काइडोमा मासिक मौसमको बारेमा तल लेखहरू छन्। तपाईको बारेमा अधिक जान्न चाहानु भएको महिना चयन गर्न स्लाइडर प्रयोग गर्नुहोस्। तल सेप्टेम्बरमा टोकियो र ओसाकाको मौसम बारे लेखहरू छन्। टोक्यो र ओसाकासँग होक्काइडो भन्दा भिन्न मौसम अवस्था छ, त्यसैले कृपया सावधान हुनुहोस्। प्रश्न-उत्तर सेप्टेम्बरमा होक्काइडोको बारेमा सेप्टेम्बरमा होक्काइडोमा हिउँ पर्दछ? मूलतः, सेप्टेम्बर मा होक्काइडो मा कुनै हिउँ पर्दैन। यद्यपि, यो सेप्टेम्बरमा हिउँ पर्न सक्छ डाईजेट्सुजान जस्ता पहाडी क्षेत्रहरूको शीर्षमा। के सेप्टेम्बरमा होक्काइडोमा फूलहरू फुलेका छन्? सेप्टेम्बरमा पनि, होक्काइडोमा राम्रा फूलहरू फूलेका छन्। यद्यपि, लैभेंडर फूलहरू फूलेको छैन। सेप्टेम्बरमा होक्काइडो कत्तिको चिसो छ? सेप्टेम्बरमा, बिहान र साँझ एकदम राम्रो छ। सेप्टेम्बरमा होक्काइडोमा हामीले कस्तो खालका लुगाहरू लगाउनु पर्छ? शरद लुगाहरू सेप्टेम्बर मा होक्काइडो मा योग्य छन्। जापानमा खस्ने लुगाहरूका लागि, कृपया निम्न लेखमा सन्दर्भ गर्नुहोस्। होक्काइडो भ्रमण गर्नका लागि उत्तम समय कहिले हो? यदि तपाइँ जाडो हिउँको दृश्यबाट आनन्द लिन चाहानुहुन्छ भने जनवरी र फेब्रुअरी उत्तम मौसमहरू हुन्। यदि तपाईं सुन्दर फूलहरू, जुलाई र अगस्त हेर्न चाहनुहुन्छ भने ...
ओसाका सेप्टेम्बरमा शीतल हुनेछ। तपाईं खुशीका साथ पर्यटन स्थलको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ। तर, सेप्टेम्बरमा वर्षाका दिनहरू बढ्ने छन्। एक जोखिम छ कि एक टाइफुन आउँछ, त्यसैले भर्खरको मौसम पूर्वानुमान प्राप्त गर्न को लागी कोशिश गर्नुहोस्। यस पृष्ठमा, म सेप्टेम्बरमा ओसाकाको मौसम वर्णन गर्छु। ओसाका मासिक मौसमको बारेमा तल लेखहरू छन्। तपाईको बारेमा अधिक जान्न चाहानु भएको महिना चयन गर्न स्लाइडर प्रयोग गर्नुहोस्। सेप्टेम्बरमा टोकियो र होक्काइडोको मौसममा लेखहरू छन्। यदि तपाईं होक्काइडोको साथसाथ ओसाका जाने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने, कृपया नोट गर्नुहोस् कि होक्काइडोको मौसम ओसाका भन्दा केही फरक छ। ओसाकामा सेप्टेम्बरमा मौसम (सिंहावलोकन) ग्राफ: ओसकामा सेप्टेम्बरमा तापमान परिवर्तन ※ जापान मौसम अभिकरण एजेन्सीले जारी गरेको तथ्यांकको आधारमा। दुबै उच्च र न्यून तापमान डेटा विगत years० बर्षको औसत हो (१ 30 1981१-२०१०) ओसाकाको मौसम होन्शुका अन्य प्रमुख शहरहरू जस्तै टोकियो जस्ता समान छ। सेप्टेम्बरमा, तातो गर्मी समाप्त भएको छ र चिसो दिन बिस्तार बिस्तार बढ्दैछ। सेप्टेम्बरको शुरुमा, त्यहाँ दिनहरू हुन्छन् जब अधिकतम तापक्रम 2010 35 डिग्री हुन्छ, तर यो सेप्टेम्बरको मध्यमा शीतल हुनेछ। सेप्टेम्बरको अन्तमा यो शीतल हुनेछ र धेरै मानिसहरूले लामो बाहिरी शर्ट लगाउँदछन्। म पहिले ओसाकामा बस्थेको छु। यो अगस्टमा धेरै तातो भएको थियो त्यसैले म शहरको केन्द्रमा जान मन पराउँदिन। जे होस्, यो सेप्टेम्बरमा खर्च गर्न धेरै सजिलो हुनेछ, र त्यहाँ म ती सम्झनाहरू छन् ...
यदि तपाईं सेप्टेम्बरमा टोकियो भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं सेप्टेम्बरमा टोकियोमा मौसम जानकारीको बारेमा चिन्तित हुनुहुनेछ। सेप्टेम्बरमा तापक्रम थोरै कम हुन्छ, जुन यात्रा गर्न सजिलो बनाउँदछ। यद्यपि सेप्टेम्बरमा टोकियोमा पनि आँधीले आक्रमण गर्न सक्छ। यस पृष्ठमा, म सेप्टेम्बरमा टोकियोको मौसमको बारेमा वर्णन गर्नेछु। तल टोकियोमा मासिक मौसमको बारेमा लेखहरू छन्। तपाईको बारेमा अधिक जान्न चाहानु भएको महिना चयन गर्न स्लाइडर प्रयोग गर्नुहोस्। तल सेप्टेम्बरमा ओसाका र होक्काइडोको मौसमका बारे लेखहरू छन्। यदि तपाईं होक्काइडो साथ साथै टोकियो जाने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने, कृपया नोट गर्नुहोस् कि होक्काइडोको मौसम टोकियो भन्दा बिलकुलै फरक छ। गर्मी र शरद clothesतुका लुगाहरूका लागि, कृपया निम्न लेखहरूमा सन्दर्भ गर्नुहोस्। सेप्टेम्बरमा टोकियोमा मौसम (अवलोकन) ग्राफ: सेप्टेम्बरमा टोकियोमा तापमान परिवर्तन ※ जापान मौसम एजेन्सीले जारी गरेको तथ्यांकको आधारमा। दुबै उच्च र न्यून तापमान डेटा विगत years० बर्षमा औसत छ (१ 30 1981१-२०१०) सेप्टेम्बरको शुरुमा, टोकियोमा तापमान अगस्टको तुलनामा थोरै कम हुनेछ, तर यो अझै थोरै तातो छ। किनकि दिनको तापक्रम degrees० डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी हुन सक्छ, कृपया तातो बारे सावधान रहनुहोस्। यो सेप्टेम्बरको बीचमा शीतल हुनेछ, र हामी शरद feelतु आएको छ लाग्छ। सेप्टेम्बरको अन्तमा, हामी प्राय जसो आरामसँग खर्च गर्न सक्षम हुनेछौं। यद्यपि समय-समयमा पानी पर्दछ, कृपया छाता ल्याउनुहोस्। त्यहाँ तपाईंले सेप्टेम्बरमा विशेष ध्यान दिन केहि छ। ती आँधीको आक्रमण हो। प्रत्येक बर्ष ...
यदि तपाई सेप्टेम्बरमा जापान मा यात्रा गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईको कस्तो प्रकारको ध्यान छ? त्यसो भए, सेप्टेम्बरमा जापानमा पर्यटन स्थलहरू कहाँ सिफारिस गरिएका छन्? यस पृष्ठमा, म तपाईंलाई उपयोगी जानकारी प्रस्तुत गर्दछु जब तपाईं सेप्टेम्बरमा जापान जानुहुन्छ। सेप्टेम्बरमा टोकियो, ओसाका, होक्काइडोको जानकारी यदि तपाई सेप्टेम्बरमा टोकियो, ओसाका वा होक्काइडो जाने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने, कृपया तलको स्लाइडरको छवि क्लिक गर्नुहोस् र अधिक जानकारी हेर्न जानुहोस्। आउनुहोस् हामी सधैं भर्खरको मौसम पूर्वानुमान प्राप्त गरौं एउटा ठूलो छाल समुद्री तटमा अवस्थित ओराइ इसोसाकी तीर्थ मन्दिरमा प्रहार गर्दछ जब आँधीबेहरी आउँछ = AdobeStock यदि तपाईं सेप्टेम्बरमा जापान जानुहुन्छ भने, कृपया सधैं पछिल्ला मौसम पूर्वानुमान प्राप्त गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। सेप्टेम्बरमा मौसम गम्भीर परिवर्तन हुँदैछ। सेप्टेम्बर मा धेरै बरसात दिन छन्। थप रूपमा, आँधीले अक्सर आक्रमण गर्दछ। यदि जापानमा एक टाइफुन आउँदो दिन देखिन्छ भने, कृपया तपाईंको यात्रा यात्रा जतिसक्दो चाँडो परिवर्तन गर्ने विचार गर्नुहोस्। जब टाइफून आइपुग्छ, धेरै रेल र विमानहरू सर्दैनन्। तपाईं सार्न सक्नुहुन्न। यदि तपाईं यस्तो अवस्था सामना गर्नुपर्दछ, कृपया नजिकको होटलको लागि आरक्षण गर्नुहोस् यो पूर्ण हुनु अघि। जापानको दर्शनीय स्थलहरू जस्तै मन्दिर र तीर्थ स्थानहरू भ्रमण गरौं - किमोनोमा रातो तोरी फाटकमा हिंड्ने महिलाहरू, क्योटोको जापानको प्रसिद्ध स्थलहरू मध्ये एक, शटस्टकमा जापान = शटरस्टक जब पर्यटक सेप्टेम्बरमा यात्रा गर्छन्, तिनीहरू टाइफुन आक्रमणको बारेमा चिन्तित छन्। यद्यपि यो बाहेक, मेरो विचारमा यो एक अर्थमा धेरै राम्रो समय हो। किनभने प्रसिद्ध पर्यटन स्थलहरू ...